မိန်းမ မကြိုက်​တဲ့ ဆိုင်​ကယ်​ကြီးစီးပြီး ပဲများ​နေတဲ့ လင်းလင်း – Myanmar Hot News
သာယာ​ပျော်​ရွင်​စရာ​ကောင်းတဲ့ မိသားစု​လေးကိုပိူင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်​သု​ဝေတို့ဟာ ပရိတ်​သတ်​အားအကျရဆုံး မိသားစု​လေးဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။​မေ​မေချစ်​သု​ဝေနဲ့ ​ဖေ​ဖေလင်းလင်းတို့ရဲ့ မင်းသမီး​လေး​တွေ ဖြစ်​တဲ့ ​ခေတ်​နဲ့ သစ်​​လေးတို့ဟာ တစ်​​နေ့တစ်​ခြား နဲ့မျက်​စိ​ရှေ့တင်​ကြီးလာပါပြီ​နော်​။
မကြာခဏ ​ခေတ်​နဲ့သစ်​​လေး​တို့ပုံ​လေးကို ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက်​တင်​​ပေး​လေ့ရှိပြီး ချစ်​ဖို့​ကောင်းတဲ့ ​ခေါတ်​နဲ့သစ်​​လေးကိုလည်း ပရိတ်​သတ်​​တွေက သည်းသည်းလှုပ်​ချစ်​​နေရပါတယ်​။
​ဖေ​ဖေဖြစ်​သူလင်းလင်း သူ့ရဲ့ ဝါသနာဖြစ်​တဲ့ ဆိုင်​ကယ်​ စီးရတာ​ဘေယ်​​လောက်​ကြိုက်​​ကြောင်းကိုစာချီဖွဲ့နွဲ့ထားပါ​သေးတယ်​။လင်းလင်းကတော့ “မုန့်ကျွတ် လား ? ရွှေကျီး ကိုသိပ်ကြိုက်တာပေါ့,,မုန့်တီ လား ? ဒေါ်တော ပေါ့ဗျာ,,ဇီးပေါင်း လား ? ဟ မတ္တရာကမစီမာ ပေါ့ဟ,,ခိုတောင် လား ? အထမ်းသယ်ရောင်းတာ အားလုံးကြိုက်,,ပဲလမုန့် လား? ကြိုင်သင်း ကိုသိပ်ကြိုက်,,အုန်းထမင်း,ဒံပေါက်လား ? ကရဝိတ်ဆီသွား,,, နှမ်းမနဲ လား ? ဖားသားလဖုန်း နားမှာ ဒေါ်ရှိ ရှိတယ်လေ,,မြီးရှည် လား ? မကျီးရိပ် ကအာသာ အပြေဆုံး,,ဟာလီ ဆိုင်ကယ်ပေါ့ဗျာ,,စောရီး ခင်ဗျားဘယ်ဆိုင်ကယ်အကြိုက်ဆုံးလဲ မေးနေမှာစိုးလို့,,,ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် အားလုံးကို ကြော်ငြာပေးသည်။ကြော်ငြာခအနေနဲ့ မုန့်ကျွေးကြမည်ဆိုပါကလဲ ဝမ်းသာလန်းဆန်းစွာ အတန်ငယ်စဉ်းစားပြီး လက်ခံပေးပါမည်။
သတိ – ဤပိုစ့်ကို အန္တာရာယ်များလို့ ဆိုင်ကယ်မစီးစေချင်တဲ့ခေတ်ခေတ်၊သစ်သစ် တို့ရဲ့အမေ မမြင်ပါစေနဲ့” ဆိုပြီး ​ခေတ်​နဲ့သစ်​တို့​မေ​မေလစ်​တုန်း အမိအရ ဓာတ်​ဖမ်းထားတဲ့ပုံ​လေး​တွေကိုတင်​ထားခဲ့ပါတယ်​။လင်းလင်းက​တော့ ​ခေတ်​နဲ့သစ်​တို့​မေ​မေ ​တွေ့ရင်​အဆူခံရ​တော့မယ်​​နော်​။
Source_ Htwe lynn ko